Akpaaka Dual Sensor Basin Mixer Faucet Chrome
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ / Akpaaka Sensọ Basin igwekota Igwe ọkụ Chrome
Typedị ụdị ihe mmetụta a dị mma nke ukwuu. Jiri nwayọ kwee aka gị n'okpuru ebe ọpụpụ mmiri, mmiri ga-agbapụta na-akpaghị aka, ị nwere ike ịsacha aka gị.
Uru nke ụlọ mmiri na-asa ahụ
1. Otu uru dị na mmiri induction: ịchekwa mmiri nwere ọgụgụ isi. Enwere ike ịgbanye mmiri gbanyụọ ma gbanyụọ ya site na njikwa ngwa ngwa, yana aka ma ọ bụ mmiri nwere ike ịbanye na nbata ya, nsị ahụ ga-agbapụta mmiri ozugbo wee kwụsị mgbe ọpụpụ, nke nwere ezigbo mmiri ịchekwa mmiri.
2. Ihe ngosi uzo abuo: uru oge. Igwe mmiri eji emechi onwe ya maka ịsa mmiri n’oge, nke nwere ike ịzere imebi mmiri n’ihi ihe ndị si mba ọzọ nọ n’ime mmata ahụ ogologo oge.
3. uzọ mmebi intuction: uru atọ dị ọcha. Switgbanwuo na gbanyụọ mmiri a na-eme kpamkpam site na ihe mmetụta, na-enweghị mkpa iji aka emetụ pọmpụ aka, na-ezere ịfefe nje nke nje.
4. Ntinye ihe nlere anya nke ano: imeghari ihe. Enwere ike idozi ihe nkedo dabere na gburugburu ebe ọrụ dị.
5. Uru nke induction faucet ise: ọdabara ebe dị iche iche. Igwe mmiri dị n'ime mmiri kwesịrị ekwesị maka ụlọ oriri na nkwari akụ, ụlọ obibi, ụlọ ọfịs, ọdụ ụgbọ elu, ụlọ ọrụ ahụike na ebe ndị ọzọ, nwere ike izere ihe dị njọ nke imebi mmiri.
SKU: EVE-0180 Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ Tags: ihe mmetụta aquisense, akpaaka na-asa, igwe na-agwakọta, Ware Sanitary, sensọ sensotronic, emetụghị aka